कोरोना लागेका व्यक्तिसँग कति दिन अगाडि सम्पर्क भए जोखिम? :: Setopati
मानिलिउँ, तपाईंको अफिसमा सँगै काम गर्ने साथीलाई कोरोना पोजेटिभ देखियो। तपाईं कुनै न कुनै रूपमा त्यो साथीको सम्पर्कमा आउनुभएको थियो। यस्तो अवस्थामा के तपाईंलाई पनि भाइरस सरेको हुन सक्छ?
अब मानिलिउँ, तपाईंलाई संक्रमणको शंका लाग्यो वा परीक्षण गराउँदा पोजेटिभ नै देखियो। यस्तो अवस्थामा होम आइसोलेसनमै बस्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?
पोहोर सांसद गगन थापाले फेसबुक संवादका क्रममा यस्तै प्रश्न सरूवारोग विशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदीसँग सोधेका थिए।
'हामी जनस्वास्थ्यमा यिनै दुइटा आधार मानेर काम गर्छौं,' डा. सुवेदीले भने।
उनले अझ विस्तार लगाए, 'तपाईंले कुनै साथीलाई एक साताअघि भेट्नुभएको थियो। त्यो साथीलाई हिजोदेखि ज्वरो आउन थाल्यो र आज परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखियो भने तपाईं डराउनुपर्दैन। तर, त्यो साथीलाई दुई दिनअघि मात्र भेटेको हो भने अब तपाईं पनि जोखिममा पर्नुभयो। तपाईंलाई पनि सरेको हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईंले आफ्नो पनि परीक्षण गराउनुपर्छ।'
यति हुँदाहुँदै त्यो संक्रमित साथीलाई परैबाट हाइ-हेलो गरेको हो भने डराउनु पर्दैन।
'अर्को कुरा, तपाईंहरू दुवैले मास्क लगाउनुभएको छ भने जोखिम अझै कम हुन्छ,' उनले भने।
'यसबाट हामीले व्यक्तिगत दुरी कायम राख्नु र मास्क लगाउनु कति जरूरी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ,' उनले भने, 'हामी नेपालीहरूले मास्कको सवालमा खरो व्यवहार देखाउनैपर्छ। आफूले जतिसुकै मान्नुपर्ने मान्छे भए पनि तपाईं कृपया मास्क लगाउनुस् अनि मात्र हामी कुरा गरौं भन्न सक्नुपर्छ। कसैले नाकमुनि मास्क लगाएको छ भने उसलाई राम्ररी लगाउनुस् नभए म तपाईंसँग कुरा गर्दिनँ भन्नुपर्छ।'
'रगतमा अक्सिजनको मात्रा ९४ वा त्योभन्दा माथि छ भने हामी नर्मल भन्छौं। ९३ वा त्योभन्दा कम आए अक्सिजन कम भयो भनिन्छ,' उनले भने।
'अरू रोगमा सास फेर्न गाह्रो हुँदै गएपछि अक्सिजन घटेको थाहा हुन्छ। कोभिडमा भने तपाईंलाई सास फेर्न गाह्रो भइसकेको हुँदैन, तर अक्सिजन कम भइसकेको हुन सक्छ। यसमा अक्सिजन निकै कम भइसकेपछि मात्र लक्षण देखिन सक्छ। यस्तो बेला अस्पताल जाँदा ढिलो हुन सक्छ,' उनले भने।
यो पनि पढ्नुहोस्ः कोरोना लागेकालाई ५ देखि १० दिनको समय 'क्रिटिकल'
'त्यो कोठा अर्को मान्छेले प्रयोग गर्नु हुँदैन। कुनै कारणले त्यहाँ छिर्नुपर्‍यो भने एकदमै थोरै समय बस्नुपर्छ र दुवैले मास्क लगाउनुपर्छ,' उनले भने।
'सबैकहाँ यस्तो सुविधा नहुन सक्छ। शौचालय, बाथरुम अरू मान्छेले पनि प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने विशेष होसियारी अपनाउनुपर्छ। मास्क लगाएर मात्र जानुपर्छ। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने, 'अहिले बजारमा डिस्इन्फेक्टेन्ट झोलहरू पाइन्छन्। संक्रमित वा संक्रमणको शंका भएका व्यक्तिले शौचालय वा बाथरुम प्रयोग गरिसकेपछि धाराहरू डिस्इन्फेक्ट गर्नुपर्छ।'
उनले यो पनि भने, 'नेपालीका लागि होम आइसोलेसन जटिल छ। जसको घरमा एउटा मात्र शौचालय–बाथरुम छ र सबैले त्यही प्रयोग गर्नुपर्छ भने उनीहरूका लागि होम आइसोलेसनमा बस्न सजिलो छैन।'
'लक्षण देखिएको छैन तर परीक्षण गराउँदा पोजेटिभ आयो भने के गर्ने? तत्काल अस्पताल गइहाल्ने हो कि?'
डा. सुवेदी यसको जवाफमा भन्छन्, 'परीक्षण पोजेटिभ आयो भने माथि भनेजस्तै आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा ध्यान दिनुपर्‍यो। ज्वरो आएको छ कि छैन, अक्सिजन कम भएको छ कि छैन र अरू लक्षणहरू देखिएका छन् कि छैनन् भनेर आफूले आफैंलाई नियमित अनुगमन गर्नुपर्‍यो। अक्सिजन कम भयो वा ज्वरो धेरै आउन थाल्यो भने अस्पताल गइहाल्नुपर्‍यो।'
'यस्तो अवस्थामा व्यक्तिले आफ्नो मात्र ख्याल राखेर भएन, आफूबाट अरूलाई संक्रमण नसरोस् भनेर पनि उत्तिकै सतर्क हुनुपर्‍यो,' उनले भने, 'होम आइसोलेसनमा बस्न माथि भनेजस्तै सुविधाहरू छन् कि छैनन् विचार गर्नुपर्छ। छ भने घरमै बसे हुन्छ। नभए सरकारले भनेको ठाउँमा वा आफैंले व्यवस्था गरेर छुट्टै ठाउँमा आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ।'
धेरै मान्छे कोरोना परीक्षण गराउँदा पोजेटिभ आयो भने मात्र सतर्क हुन्छन्। डा. सुवेदी भने स्वाब परीक्षण गर्न दिएपछि नै सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउँछन्।
'कोही मान्छे परीक्षण गर्न जानु भनेकै कुनै कारणले आफू संक्रमित भएको डर लागेर हो। यस्तोमा नतिजा पर्खने सवालै आउँदैन। स्वाब दिन गएपछि नै ऊ अरूबाट पन्छिएर बस्नुपर्छ,' उनले भने।
अब हामी तेस्रो विषयमा कुरा गरौं – तरकारी, फलफूल वा अन्य खिद्रीमिद्री किन्दा त्यो सामानबाटै कोरोना सर्छ कि सँदैन?
यसमा डा. सुवेदी भन्छन्, 'सामानबाट सिधै कोरोना सर्ने होइन। किन्ने वा बेच्ने व्यक्तिले मास्क लगाएको छैन र दुईमध्ये एक जना संक्रमित छ भने उनीहरूले सास फेर्दा नाक-मुखबाट निस्किएका छिटाबाट सर्ने हो।'
'हामीले किन्ने सामानमा संक्रमित व्यक्तिको सासको छिटा परेको छ र त्यो सामान हामीले छोएर त्यही हातले नाकमुख छुँदा पनि कोरोना सर्न सक्छ। तर यसरी सर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ,' उनले भने।
'पसलबाट किनेर ल्याएको तरकारी, फलफूल पखाल्दा वा काट्दा नाकमुख छुनु हुँदैन। पखालेपछि वा काटेपछि हात राम्ररी धुनुपर्छ,' उनले भने, 'पकाउने बेला त तातोले भाइरस मरिहाल्छ।'
डा. सुवेदीले कोरोना संक्रमणबाट बच्न जापानको अनुभवले तयार पारेको एउटा फर्मुलाको पनि चर्चा गरे।
त्यो फर्मुला हो– थ्रीसी।
पहिलो– भीडभाडबाट टाढै बस्ने (क्राउड)। जति धेरै भीडभाड भयो, संक्रमण फैलिने डर उति बढी हुन्छ।
दोस्रो– बन्द कोठामा नजाने (कन्फाइन)। हावा खेल्ने सुविधा नभएको बन्द कोठामा मान्छेले सास फेर्दा त्यसका छिटा हावामा धेरै समय तैरिरहन्छन्। यसले संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ।
तेस्रो– नजिक–नजिक नबस्ने (क्लोज कन्ट्याक्ट)।
'हामीकहाँ सबभन्दा बढी संक्रमण सर्ने भनेको मान्छेहरू नजिक–नजिक बसेर हो। अरू बेला मास्क लगाउनेहरू पनि सँगै बसेर चिया पिउँदा मास्क खोल्छन्। त्यस्तो बेला भाइरस सर्ने जोखिम बढी हुन्छ,' उनले भने।
'हामीले अहिलेसम्म खोक्दा वा हाच्छियूँ गर्दा भाइरसका कणहरू निस्कन्छन् भन्ने सुनेका छौं। तर, ठूल्ठूलो स्वरले बोल्दा पनि भाइरसका कणहरू निस्कन्छन्। त्यसैले, जतिसक्दो अरूसँग दुरी राख्नुपर्छ। सँगै बसेर खाजा खान हुँदैन,' उनले भने।
(यो स्टोरी सेतोपाटीमा पहिलोपटक २०७७, भदौ ८ मा प्रकाशित थियो।)
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २६, २०७८, १५:०९:००